Autoimmune Arthritis | Diagnosis, Sintoma ary fitsaboana
24 / 06 / 2020 /i rheumatism/av loza
Hevitra tsara ho an'ny aretin Autoimmune
Inona ny vanin-taolana autoimmune? Amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba an'io karazana aretin-tratra io ianao - izay anaovan'ny hery fiarovan'ny tena ny tonon-taolana.
Ny aretin-koditra autoimmune dia anaran'ny vondrona diagnostika samihafa izay anaovan'ny hery fiarovan'ny tena ny tenany - sy ny tonon-taolana misy azy. Ny ohatra malaza indrindra ho antsika norvezianina dia arthritis rheumatic. Rehefa manafika ny fitambaran'ny vatana ny hery fiarovan'ny vatana dia hisy ny fanehoan-kevitra mamaivay. Ity fivontosana ity dia mety hiteraka fanaintainana miaraka, henjana ary fahasarotana mihetsika. Misy maherin'ny 100 ny karazana aretin'ny vanin-taolana - izay ny diagnostika samihafa dia mety miteraka soritr'aretina samihafa. Ny aretin-kozatra psoriatika sy ny vanin-taolana rheumatoid no ohatra roa mahazatra indrindra amin'ny aretin'ny autoimmune.
Amin'ity lahatsoratra ity dia mampianatra anao bebe kokoa momba ny fihenam-bidy autoimmune ianao. Anisan'ny zavatra andalovantsika:
Ny karazany isankarazany aretin-koditra Autoimmune
Sintona ny Autoimmune Arthritis
Ireo fiantraikany mampidi-doza ho an'ny famolavolana aretin-kiran'ny Autoimmune
Fitsaboana ny aretim-paritra Autoimmune
Torohevitra momba ny fanazaran-tena sy ny fanatanjahan-tena amin'ny aretin-tsaina Autoimmune (ao anatin'izany ny VIDEO)
Ny Karazan'aretina Autoimmune samihafa
Eto isika dia mandalo ny sasany amin'ireo endrika mahazatra indrindra amin'ny fihenan-tseranana autoimmune.
Rheumatoid arthritis: Ny endrika mahazatra indrindra amin'ny aretina iraisana autoimmune. Ny fitiliana matetika dia miteraka vaky sy fanaintainana eo an-tanana, tanana ary tongotra, ary koa ny lohalika raha miharatsy ny toe-javatra. Ny fikarohana dia naneho fa hatramin'ny 75% no voan'ny aretina dia ny vehivavy.
Aretin'ny atidoha: Ny psoriasis dia fantatra indrindra amin'ny fahita amin'ny hoditra, izay mahatonga ny hoditra hanisy endrika mangina ary misongotra. Araka ny 20-40% amin'ireo izay voan'ny aretin-koditra ity dia manana aretina iraisana koa antsoina hoe psoriatic arthritis. Ity farany dia mety hisy fiantraikany amin'ny tonon-taolana saika manerana ny vatana, anisan'izany ny hazondamosina, ny lohalika, ny rantsantanana, ny tongotra, ny valahany ary ny soroka.
Reactive Arthritis: Ny vanin-taolana mihetsiketsika dia tsy misy afa-tsy amin'ireo olona manana tantaran'ny aretina mikraoba sasany - toy ny Salmonella, Campylobacter ary Chlamydia. Ity aretina ity dia mety, ankoatry ny fanaintainan'ny fiaraha-miasa, dia miteraka maso mena, fanaintainana rehefa mimi sy / na maimaika eo ambanin'ny tongotra na amin'ny felatanana.
Axial Spondyloarthritis sy Ankylosing Spondylitis: Manome ny aretin ny hazondamosina samirery, izay mifangaro tsikelikely, ka mampitondra fanaintainana sy fahatsapana eo amin'ny tonon-taolana.
Aretim-bary eo amin'ny aretin-jaza (aretin-kozatra aretin-jaza): Araka ny notonon'ilay anarana dia misy fiantraikany amin'ny ankizy sy ny tanora izany karazana aretim-po io. Afaka manome soritr'aretina mahazatra toy ny fanaintainana miaraka, fanaintainana amin'ny maso, tazo ary rash ny fitsirihana.
Aretin'i Palindrome: Ny dikan-fanaintainana tsy fahita firy izay manome andiany na mifandoka amin'ny aretim-be izay mandeha avy eo samirery. Ny fitiliana matetika dia misy fiantraikany amin'ny rantsantanana, ny tànana ary ny lohalika. Ny soritr'aretina mahazatra dia ahitana fanaintainana, tapaka, matevina ary tazo.
Ny diagnostika tsirairay voalaza etsy ambony dia mety hiteraka fanaintainana sy fanaintainana ny tonon-taolana.
Ny soritr'aretin'ny vanin-taolana autoimmune dia hiova arakaraka ny famaritana manokana ny aretin-tratra. Saingy eto isika dia mandalo ireo soritr'aretina ankapobeny - izay ahitana ireto manaraka ireto:
Ohatra iray amin'ireo soritr'aretina manokana enthesitis. Ity dia soritr'aretina iray izay matetika izay misy eo amin'ny aretin'ny psoriatic, izay midika fa misy faritra saro-pady, izay miraikitra amin'ny taolam-paty sy tendons. Mety ho izany, ohatra, dia mipetaka amin'ny tendron'ny Achilles eo amin'ny hazavan'ny voditongotra na ny lamosin'ny elatra (amin'ny triceps).
Ny antony mampidi-doza amin'ny vanin-taolana autoimmune dia miankina amin'ny karazana aretiota izay voakasiky ny olona iray. Na izany aza, misy ny antony mampitombo ny mety hitrangan'ny aretin'ny autoimmune arthritis - toy ny génétika sy ny tantaram-pianakaviana amin'ny rheumatism.
Maro no nahita fa ny epigenetika dia afaka mitana anjara toerana lehibe. Anisany, ireto tranga ireto:
ny fifohana sigara
Fidirana vao misy poizina (ohatra ny setroka sigara passive ho zaza)
Ny vehivavy efa saika in-telo heny noho ny rheumatoid arthritis. Ny lehilahy, etsy ankilany, dia mitandahatra kokoa amin'ny fahazoana spartylitis ankylosing.
Rheumatologiste, izany hoe mpitsabo manokana momba ny rheumatology, dia manadihady arthritis autoimmune. Ny fizahana rheumatological dia hanontany aloha ny soritr'aretina, anisan'izany ny mahatonga ny soritr'aretina ratsy kokoa sy mihatsara kokoa. Mety hanontaniana koa ianao momba ny tantaran'ny aretina ara-pitsaboana. Ao aorian'izay dia hisy fitiliana bebe kokoa mba hahitana misimisy kokoa momba ny fahasalaman'ilay olona sy ny tonon-taolana voakasik'izany.
Ireo fitsapana diagnostika ireto dia mety ho:
Fanaraha-maso ny diagnostika (Fanamarihana X-ray, CT na MRI mba handinihana ny fahasalaman'ny fiarahana miaraka)
Ny fitiliana ny ra (anisan'izany ny fitiliana ny antony mahatonga ny rheumatic, ny antibiôsy ary ny fihenan'ny)
Tissue biopsy (azo ampiasaina psoriasis hanamafisana ny fitiliana)
Eto dia zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy fitsapana tokana afaka mamantatra ny vanin-taolana autoimmune. Ny fizotrany dia misy endrika fanilihana iray - izay ahitan'ny olona tsimoramora ny diagnostika miaraka amin'ny taha ambony azo inoana. Ny fizotry ny fanombanana toy izany dia mety amin'ny tranga maro dia maharitra fotoana maharitra.
Ny dokoteranao dia handinika lafin-javatra maro alohan'ny hametrahana drafi-pitsaboana fanafody amin'ny autoimmune arthritis. Hanombatombana ny soritr'aretinao, ny karazana aretin'ny vanin-taolana anananao ary ny fahasalamanao ankapobeny i Hen - alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny fomba tsara indrindra. Ny fitsaboana zava-mahadomelina dia saika ampiarahina amin'ny fitsaboana ara-batana sy fiofanana ho an'ny vokatra tsara indrindra.
Ireo manana endrika aretin'andoha malefaka kokoa dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahazoana ny NSAIDS ihany. Toa an'i Ibuprofen.
Ny sasany kosa tsy maintsy mifindra amin'ny zava-mahadomelina mahery sy mavesatra antsoina hoe DMARDS - toy ny methodextrate. Raha tsy mandeha ny DMARDS, dia mety ny manandrana ilay fantatra amin'ny hoe biolojika. Manakana ny rafi-pifandraisan'ny rafitra fiarovana. Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny DMARDS sy ny fitsaboana biolojika dia fiarovana amin'ny hery fiarovana (mampihena ny fiarovan'ny hery fiarovan'ny hery fiarovan'ny vatana ary mahatonga ilay olona hitondra azy ireo mora voan'ny aretina sy ny fivontosana).
Fitsaboana sy fanatanjahan-tena hafa
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny olona iray dia te hampifangaro ny fitsaboana zava-mahadomelina amin'ny fitsaboana ara-batana ary avy eo koa ny fanovana ny sakafo. Ity dia mety misy:
Sakafo manohitra fanaintainana
Torolàlana momba ny fitsaboana sy fiofanana amin'ny olona manana alalana ara-pahasalamana manana mari-pahaizana ho an'ny hozatra sy ny hozatra (Physiotherapist, Chiropraktur na mpitsabo arak'asa).
Feo manafotra (ohatra ireo fonon-tànana mihetsika)
Fijanonana fifohana sigara
Manao fanatanjahan-tena amin'ny dobo filan'ny rano
Ny fomba fiasa feno amin'ny fitsaboana ny arthritis autoimmune dia zava-dehibe mba hanamorana ny vokatra tsara indrindra. Ao amin'ity lahatsoratra ity eto Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny sakafo anti-inflammatory. Ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia zava-dehibe ihany koa amin'ny fanentanana ny fiasa tsara sy ny fihenan'ny ra. Ity horonantsary eto ambany ity dia mampiseho ohatra iray amin'ny programa fanazaran-tena natao mba hiadiana amin'ny osteoarthritis amin'ny tananao:
LAHATSORATANA: Fanao fanatanjahan-tena 7 hanoherana ny tanana Osteoarthritis
Miaraha aminay mianakavy! Misoratra anarana maimaim-poana amin'ny fantsanay youtube (tsindrio eto) ho an'ny programa fanatanjahan-tena maimaim-poana sy ny horonantsary fahasalamana.
Fanoloran-tena ho an'ny aretin-kozatra
famatrarana Noise (toy ny ba kiraro fanerena izay manampy amin'ny fitomboan'ny rà mandriaka mankany amin'ny hozatra marary na fonon-tànana famatrarana namboarina manokana og ba kiraro manohitra ny soritr'aretin'ny rheumatic amin'ny tanana sy tongotra)
Kitiho ny sary raha te hahalala bebe kokoa momba ny fonon-tànana famatrarana.
Mpisintona rantsan-tongotra (karazana rheumatisme maro no mety hiteraka rantsan-tongony miondrika - ohatra ny rantsan-tantanana na ny hallux valgus (rantsan-tongotra lehibe miondrika) - ny mpantsaka rantsan-tongotra dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ireo)
Kasety Mini (maro no manana fanaintainana rheumatic sy maharitra fa mora kokoa ny mampiofana amin'ny elastika mahazatra)
Hiteraka teboka baolina (manampy tena hanampy ny hozatra isan'andro)
Crème Arnica na fanafanana hafanana (maro ny olona no mitatitra fanamaivanana ny fanaintainana raha toa ka mampiasa, ohatra, crème arnica na «conditioneur de heat»)
- Betsaka ny olona mampiasa crème arnica ho an'ny fanaintainana vokatry ny tonon-taolana mafy sy hozatra marary. Tsindrio ny sary etsy ambony raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba arnicakrem afaka manampy amin'ny fanalefahana ny sasany amin'ireo toe-javatra fanaintainanao.
Ny fiantraikany maharitra amin'ny fihenan'aretin'ny autoimmune dia miankina amin'ny fahasamihafana misy olona mijaly. Ohatra iray mahazatra dia ny aretin'ny aretim-po izay mety hiteraka tsy fitovian'ny toetra amin'ny tanana sy ny tongotra. Anisan'ny zavatra hafa, i Jahn Teigen tiantsika dia voan'ny aretin'ny aretim-piraisan-tsaina, ary ireo fiovana iraisana ireo dia nandeha lavitra noho ny asany isan'andro. Ny fikarohana koa dia naneho fa ireo izay voan'ny aretin'ny aretim-po dia tandindomin-doza kokoa ho voan'ny aretim-po sy diabeta (1). Amin'ny tranga tsy fahita firy, ny fahasimban'ny fiaraha-miasa dia mety ho mafy tokoa ka mitaky fandidiana - toy ny fanoloana lohalika na valahana.
Ny olona voan'ny aretin'ny autoimmune dia mandalo fotoanan'ny fanaintainana sy fivontosana matetika. Ireo dia mety hanasarotra ny fiasana na hanao fiarahamonina toy ny taloha ihany. Mba hisorohana ny fahasarotana dia zava-dehibe ny fanaovana Diagnostika sy fanombanana mialoha - mba hahazoan'ny olona fitsaboana ara-pahasalamana sy ara-batana tsara indrindra.
Zava-dehibe ny fihanaky ny diagnostika voalohany
Ny fitsaboana dia tokony hatao feno sy tsy tapaka (Fanafody, fitsaboana ara-batana, fanatanjahan-tena, fanazaran-tena ary sakafo mahavelona)
Fampiasana tsy tapaka famatrarana tabataba dia mety ilaina amin'ny fitazonana ny mivezivezy mivezivezy.
Ny fitarainana maharitra dia mety hihoatra ny fahafaham-po amin'ny asa sy ny asa ataon'andro
Fanontaniana? Aza misalasala mandefa azy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Raha tsy izany, manoro hevitra anao izahay hiaraka amin'ny vondrona mpanohana anay: Rheumatism sy fanaintainan'ny aretina - Norvezy: Fikarohana sy vaovao. Eto ianao no hahita fampahalalana mahasoa ary afaka mikaroka amin'ny alàlan'ny angon-drakitray momba ireo fanontaniana teo aloha. Manantena izahay fa hahita anao any.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/autoimmun-artritt.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2020-06-24 11:42:322021-03-24 10:51:34Autoimmune arthritis
Seronegatif arthritis Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Sacroilitis [Torolàlana tsara]